रिसाउन पटक्कै मन छैन । “आ ! होस् !! गुनासो गर्दिनँ”, सोच्छु र आइफोनमा फेसबुक खोल्छु । अघिसम्म घरिघरि हेरुँहेरुँ लाग्ने आफ्नै तस्बिर पनि कति नराम्रो लागेको ! लाइक्स र कमेन्ट गर्ने सबैका आँखा के भएका हुन् ? होम पेजमा पनि कति धेरै क्याथार्सिस हो ?
त्यही साथीलाई फोन गरेर आफ्नो दुर्गति सुनाउँछु ­ “कहिलेकाही त्यस्तो भैहाल्छ नि, ह्या छोडी दे !” ­ ऊ सम्झाउन खोज्छे ।
म रोई नै हाल्छु ! जत्तिकै गरी उसले समाधान गर्ने नसक्ने समस्यालाई तन्काइरहन्छु ।
“आऽऽ तँ ध्यान गर्ने मान्छे । ध्यान गर्ने मान्छे भएर रिसाउन पाइन्छ ?” ऊ मलाई भुतुक्क पार्ने झटारो हान्छे ।
त्यत्तिखेरै मेरो छेउनिरै टहलिरहेका किशोर किशोरीहरुले पिएको सिग्रेटको धुवाँ मेरो नाकमा हरक्क पस्छ ।
उसको झटारोले लल्याकलुलुक भए पनि चुरोटको दुर्गन्धले मलाई जोस्याउँछ, “एतिखेर, यो गन्धे युनिफर्ममा म ध्यान गरुम् ? ल भयो ! तँ फोन् राख् ।”
ऊ बेस्सरी हाँस्छे, म फोन काट्छु ।
साच्चै ! ध्यान त जतिखेर गरे पनि त भो नि ! वाच फुलनेस अर्थात् साक्षीभाव नै त ध्यान हो !
लामो श्वास फेरेर मैले स्वयम् आफैंलाई यो क्षणको लागि जिम्मेवार ठान्छु । साथीसँग रिस पोख्नु आफ्नै गल्ती भएको महसुस गर्दै अब आइन्दा यस्तो स्थितिमा आफ्नै सुझबुझ प्रयोग गर्ने निर्णय गर्छु । फोन साइलेन्टमा राखेर आफैंलाई हेर्दै जादाँ कुर्कुच्चानेर पाइन्टमा पहेँलो लागिरहेको रहेछ । अघि एकजना ‘रेजिडेन्ट’लाई खाना खुवाउँदा अलिकति झरेको थियो । अहिले त ठ्याक्कै आचीजस्तो देखिएको छ । उफ ! यस्तो हविगतमा ध्यान गरुम् ?
मेचमा टाउको अड्याएर आँखा चिम्लिन्छु । अघि दिन भरको उखरमाउलो गर्मी अहिले शान्त भइसकेको रहेछ । शिरशिरी चिसो हावाले घरिघरि छुँदा त्यो हावा मेरै लागि चिसो भएको जस्तो लागिरहेको छ ।
श्वास–प्रश्वासको एउटा गति कायम भएको छ । रिस, उत्तेजना, आवेग र हर्षको भन्दा एकदमै फरक, स्थिर र शान्त ।
मेरो जुत्तामा केहीले छोइरहेको छ, ढुकुर मुकुर ढुकुर मुकुर आवाजले छुन्छ । केही परेवाहरु छेउछाउमा बडो शानले ढलकमलक गरिरहेका छन् । मनमा लाग्यो­ ब्यागमा केही भएको भए खान दिन हुन्थ्यो र एक छिन जिस्किन पाइन्थ्यो । प्लेटफर्मको अर्को छेउबाट अँगालोमा जोडिएर आइरहेको किशोरकिशोरीको जोडीले ती परेवालाई कुल्चिउँला जसरी गरेर गए । यी परेवाहरु हाम्रो घरका परेवा जत्तिकै थेत्तरा रहेछन् । ती किशोर किशोरीलाई वेवास्ता गर्दै उनीहरु ताउरमाउरमा व्यस्त छन् । परेवाले जस्तै आफूसँग असम्बन्धित कुराहरुलाई ‘बालै नदिएर’ जिउन पाए !
हाम्रो घरका परेवाहरु दलिनमा बसिरहन्थे । गहुँ, जौ र कनिका जति नै खुवाए पनि कुन्नि केको बदला लिएजस्ता, हामी दलिनमुनि पुग्दा ती टाउकोमा बिस्ट्याइदिन्थे । टाउकोमा एकाएक तातो महशुश हुन्थ्यो र छाम्दा साह्रै गन्हाउँथ्यो । परेवाको सात पुस्तालाई जति नै गाली गरे पनि कुनै परेवा न मर्थे, न घर छोडेर जान्थे । बरु आप्mनो सन्तान बिस्तार गर्दै दलिन र बुइँगल कब्जा गरिरहन्थे ।
ढुकुरमुकुर परेवाले ‘अहिले’बाट मलाई ‘अस्ति नै’मा पु¥याइदिन्छन् । अहिले यो क्षणमा म जिउन चाहन्छु । विगत र भविष्यबाट मुक्त हुन चाहन्छु । दिमागमा झिलिक्क हुन्छ । परेवाको ढलकमलकमा मादलको समला बज्न थाल्छ । आहा कति मिठो !!!!
आधा घण्टा बिती नै हाल्यो । समय कहीँ रोकिन्छ र ? म ट्रेन भित्र बसिसकेकी छु ।
दिस टू श्याल पास­ ओशोको अमृत वचन मूलमन्त्र भएको छ ।
हरेक मुस्किलहरुमा यो मन्त्रले ठूलो काम गरेको छ­ दिस टू श्याल पास ।
साँच्चै नै कुनै पनि खुशीको क्षण वा दुःखको पल स्थायी भएर रहँदैन । परिवर्तन भैरहन्छ । मात्र त्यो समयमा हामीले आफूलाई कत्तिको धैर्यवान राख्छौँ, त्यसमा भर पर्छ ।
प्रसङ्ग रिसको छ । ध्यान गर्ने मान्छे भएर रिसाउन पाइन्छ ? अञ्जानमै उसले मलाइ मिठो झापड हानेकी छे । त्यसो त यस्तो झापड खाएको पहिलोपल्ट कहाँ हो र ?
रिस एउटा अवस्था हो मेरो बुझाइमा । जब हाम्रो मस्तिष्क र मनले ठीक नठानेको कुरामा सबै शक्ति केन्द्रित हुन्छ, उत्पन्न हुने आवेग नै रिस हो ।
रिसको सुरमा मैले क्विन साइजको बेडलाई एक्लै उचालेर सारेकी छु । एकदमै ठूलो भारी जुरुक्कै बोकेकी छु । सम्झिने हो भने हामी सबैले रिसको झोँकमा कहिल्यै सामान्यतया गर्न नसकिने कुराहरु गरेको हुनुपर्छ ।
अतः मेरो विचारमा रिस आवेग हो । नकारात्मक पक्षमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भएको अवस्था हो ।
ध्यान नियमित रुपमा गरिरहदा त्यो शक्तिलाई हामीले रुपान्तरण गर्न सक्छौँ । वास्तवमा हामीले उत्पादन गरिरहने हरेक शक्ति ध्यानमा केन्द्रित ग¥यौँ भने सकारात्मक शक्तिमा रुपान्तरण हुन सक्छ । स्मरण रहोस्, शक्तिको सामान्य वैज्ञानिक नियमअनुसार पनि शक्ति कहिल्यै नष्ट हुँदैन, रुपान्तरण भै रहन्छ ।
ओशोले रिसबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई सिर्जनात्मकतामा लगाउन सुझाव दिनु भएको छ ।
ध्यान गर्ने विधि हुन्छ । यत्तिकै आँखा चिम्लिदैमा वा श्वास हेर्दैमा ध्यान हुँदैन । यसका पनि केही सरल तर अत्यावश्यक नियमहरु छन् । शुरुका दिनहरुमा ती नियमहरु पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । ध्यानका विधिहरु निष्ठापूर्वक पालना गर्दै जाँदा मात्र बिस्तारै बानी पर्दै गइन्छ र सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिन थाल्छन् ।
ध्यान गर्न शुरु गर्ने बित्तिकै अथवा केही महिना वा वर्षमा मान्छे बुद्ध हुन सक्दैन । मान्छेका प्राकृतिक स्वभावहरू रही नै रहन्छन् । शरीर र मन भन्दा पर पुग्न नित्य साधनाको जरुरत पर्छ । त्यही साधनाको पहिलो, दोश्रो हुँदै अन्तिम खुड्किलो ध्यान हो ।
रिस उठेको बेला मान्छेले कि तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ वा मौन भएर बसिरहन्छ ।
मेरो विचारमा रिस उठेको बेला तुरुन्त प्रतिक्रिया दिनु वा मौन बस्नु दुवै तरिका गलत हो । तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिँदा हाम्रो अत्याधिक शक्तिले हामीलाई पक्का क्राेधी बनाइदिन्छ । चूप लागेर बस्यौँ भने उत्पन्न भएको शक्ति गुम्सिरहन्छ र बेला न कुबेला विष्फोट हुने खतरा हुन्छ । बरु श्वासलाई नियन्त्रण गर्दै सामान्य तरिकाले असहमति जारी ग¥यौँ भने रिसको शक्ति ‘रिलिज’ पनि हुन्छ, समस्या समाधान पनि हुन्छ ।
त्यसबाहेक, ओशोले प्रतिपादन गरेको ध्यान विधिमा एउटा चरणमा ती सम्पूर्ण आवेगहरू निकाल्ने चरण पनि हुन्छ, जुन चरणको प्रयोगपछि हाम्रा आवेगहरू ध्यानमै निस्किन्छन् र ध्यानमै सकिन्छन् । ध्यान सकेर उठेपछि मान्छे ती आवेगहरुबाट धेरै हदसम्म मुक्त हुन्छ ।
ध्यानको अन्तिम गन्तव्य मोक्ष हो । तथापि मोक्ष प्राप्तिको महायात्रामा पाइला बढाउदै जाँदा मानवीय जीवनका रिस, लोभ, मोह आदि जस्ता कुराहरु व्यवस्थित र न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् ।